Yuusuf Garaad Muxuu Ka Yidhi Xafiis Ay Dawlada Kenya Ka Furanayso Hargeysa?
(Hadhwanaagnews) Wednesday, July 11, 2018 13:13:11
Yuusuf Garaad Oo Ka Hadlay Xafiiska Ay Dawlada Kenya Ka Furanayso Hargeysa
Hargeysa(HWN):-Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa xukumadda Farmaajo ku canaantay in aanay dalal badan ka furan safaaraddo halka dawladda Kenya ka furanayso Hargeysa iyo Kismaayo xafiisyo xidhiidhka iyo danahooda ka shaqeeya.
Dawladda Kenya ayaa dhawaan shaacisay in ay magaalada Hargeysa ka furanayso xafiis sidoo kalena magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Puntland ka furanayso xafiis.
Ganacsatada qaadka ee Kenya ayaa si weyn ugu ololeyn jiray xidhiidhka Hargeysa iyo Nairobi halka Kismaayo lagu xanto in ay tahay maamul si dhaw ula shaqeeya Kenya.
Kenya waxay Afrika iyo Asia ka
fureysaa 16 Xafiis Ergo-Diblomaasiyadeed oo hor leh.
Waxay isugu jiraan Safaarado midkood laga furayo caasimadda Djibouti, Qunsuliyado iyo laba xafiis oo ay ka fureyso Hargeysa iyo Kismaayo.